Global Voices teny Malagasy » Fampitsaharana ny Fanimbinana Taovam-pananahan’ny Vehivavy sy ny Famoràna Azy ao Afrika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Janoary 2017 7:49 GMT 1	 · Mpanoratra Rakotomalala Nandika miora
Sokajy: Afrika Mainty, Etiopia, Gambia, Ginea, Senegal, Somalia, Somaliland, Fahasalamàna, Fanabeazana, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Tanora, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Aja Babung Sidibeh dia “mpanimbina taovam-pananahan'ny vehivavy  (MGF) tao amin'ny nosy nahaterahany, Janjangbureh ao Gambia. Androany, mandray anjara mavitrika amin'ny ady hanoherana io fomba fanao manimba ny taovam-pananahana io izy. Ny fijoroana vavolombelony :
Ny tatitry ny Firenena Mikambana ho an'ny taona 2016  (PDF) dia mandalina ny fiantraikan'ny fanaovana ireny fanimbinana taovam-pananahan'ny vehivavy ireny amin'ny zo maha-olombelona ( MGF/E) ireo vehivavy sy ankizy vavy niharany.
Araka ny voalazan'ny OMS, vehivavy eo anelanelan'ny 130 sy 140 tapitrisa  no mijaly na nijaly noho ny fahasarotana nateraky ny MGF/E. Isantaona, vehivavy telo tapitrisa no mbola mety ho tandindonin-doza amin'izy io. Manao tombana an'ireo ezaky ny governemanta sy ireo mpiaramiasa aminy eo an-toerana ary iraisampirenena mba hiadiana amin'ilay fomba fanao ihany koa ilay tatitra, no sady mitily ireo antony fototra izay mahatonga ireo fepetra noraisina hatramin'izao ho zara raha mahomby.
Ireo MGF/E no fomba fanao izay tena mbola raiki-tampisaka lalina any anatin'ny fomba amam-panao: izany mihitsy, na dia voaràran'ny lalàna gineana aza, tena mbola mihanaka be any amin'ny Repoblikan'i Gine ny MGF/E, firenena izay 97 % amin'ireo ankizivavy sy vehivavy ao anelanelan'ny 15 sy 49 taona no niharan'ny fanimbinana taovam-pananahana . Fomba fanao tena mihanaka be ny MGF/E any amin'ny tsirairay amin'ireo lafintany efatra ao amin'ny firenena, ary any anivon'ireo foko, finoana sy tontolom-piarahamonina. Raha mirona mankamin'ny fihenana io fomba fanao io manerantany, ny fanadihadiana iray momba ny fitombon'ny mponina sy ny fahasalamana natao tamin'ny 2012 kosa mamehy azy aminà fiakarana kelin'ny taham-pitohizan'ny fanaovana MGF/E tao Gine hatramin'ny 2002. Mitàna ny laharana faharoa manerantany araka izany ny firenena raha ny taham-pisian'io fomba io, aorian'i Somalia.
Raiki-tampisaka ao anatin'ny kolontsain'ny herisetra atao amin'ny vehivavy ireny fomba fanao sy fitondrantena ireny ary mbola mijanona ho zavapady ny firesahana azy io hatramin'ny 2017 nony injay ireo senatera amerikàna roa Joe Biden sy Richard Lugar nampiditra ny Hetsika iraisampirenena hanoherana ny herisetra atao amin'ny vehivavy .
Ao Somaliland, ny tranga nanjo an'i Edna Adan Ismail  no manaingo ny hery manimba anànan'io fomba nentindrazana io, sy ireo ezaka mila atao mba hahafahana mampitsahatra azy. Edna, teraka tao aminà fianakaviana mpitsabo avy amin'ny sokajin'ireo manankatao ao amin'ny firenena, dia vao 8 taona monja fony izy nanimbinana. Ny tanjon'io fomba io, araka ny nolazain'ireo akaiky azy, dia ny hampihenàna ny faniriana filàna firaisana ao anatiny rehefa mitombo izy, hampidinana araka izany ny mety hisian'ny fifampikasokasohana sy hiantohana hoe ‘olona mendrika halaina ho vady’ izy. Tantarain'i Edna fa nanery azy ho foraina ny reniny na teo aza ny fandàvana hentitra avy amin'ny rainy izay tsy teo an-toerana tamin'ny andro nanimbàna ny taovam-pananahany. Tora-tomany araka izany ny rainy raha nahita ny fihetsika natao nandritra ny tsy naha-teo azy sy ny tsy nahavitàny niaro an-janany vavy. Nampihozongozona ny tokantranon'izy mivady io fihetsika io ary nanomboka teo i Edna dia lasa mpikatroka tsy azo akisoka amin'ny tolona manohitra ny MGF/E. Amin'ny naha-olona nobeazina azy tany aminà fakiolte britanika iray, na misy aza ny tsy fitovian'ny vintana eo amin'ny lahy sy ny vavy, Edna no lasa vehivavy voalohany nanao ny asan'ny mpampivelona tao amin'ny fireneny, ary taty aoriana kely dia lasa vadin'ny filoha tao Somaliland.
Ireo vokatra aterany amin'ny fiainana ara-nofon'ireny vehivavy ireny dia haloka bevava atao amin'ny maha-olombelona, na amin'ny fotoanan'ny fadimbolana izany, na amin'ny fotoanan'ny firaisana ara-nofo sy ny fotoana fiterahana. Mazàna io fihetsika io no miafara aminà fahaverezan-drà  izay mitarika fahafatesan'ilay vehivavy, na noho ny fahasarotana, vokatry ny faharovitan'ny nofo ao amin'ny fivaviany mandritry ny fotoana iterahany.
Amin'ny ankapobeny ny MGF/E dia atao any anivon'ireo ankohonana miozolmana sy ny sasantsasany amin'ny ankohonana kristiana ao Afrika. Tsy hita anay amin'ireo ankohonana miozolmna aivelan'i Afrika ireny fomba fanao ireny, raha tsy hoe angaha aminà isa faran'izay kely ao Yemen, any amin'ny Sultanat d'Oman, ao Indônezia sy Malezia. Hita ao anatin'ity tatitry ny Amnesty International  (PDF) ity ny tombatomban'ny isanjaton'ireo vehivavy efa niharan'ny MGF/E isaky ny firenena. Ao Mali sy Senegaly, ny vadin'ireo mpanefy no matetika tena mbola mano ity fomba ity. Any an-toerana hafa dia ireo mpampiteraka amin'ny fomban-drazana.
Tao Senegaly, vitan'ny Tostan, fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakàna, ny namongotra io fomba fanao io noho ny fanentanana iray nanabeazana  ireo mponina am-bohitra, lahy sy vavy, ka tanjona tamin'izany ny tsy hampifandona azy ireo amin'ny fomban-drazany sy ny finoany. Nitondra vokatra randra-mitarika teo amin'ny fisorohana ny vokadratsin'ireny fanimbinana ireny eo amin'ny fahasalaman'ny vehivavy ny fanabeazana iraisana, ny fampidirana ny famatsiambola madinika, ny fitantanana ny tanàna ary ny fifanabeazan'ny olon-tsahala. Azo noresahana tanaty fitoniana sy firahalahiana ny resaka fanimbinana taovamèpananahan'ny vehivavy ary sambany tamin'ny 1997, vehivavy 35 avy amin'ny fari-bohitr'i Malicounda Bambara no nanambara fa tsy ho firaina izany ny zanak'izy ireo.
Ny ONG etiopiana KMG Ethiopia  koa dia nahavita nampihemotra io fomab fanao io tao Etiopia tamin'ny alàlan'io fomba fiasa io, tamin'ny fanehoana hoe ny fanovàna tanteraka ireo vehivavy amin'ny alàlan'ny fomba fiery iraisna no tena mahomby indrindra, mbola taloha lavitry ny fanambaràna ireo lalàna sy ny fanambaràna ireo fanapahankevitra goavana iraisampirenena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/01/19/94592/
 mpanimbina taovam-pananahan'ny vehivavy: https://fr.wikipedia.org/wiki/Mutilations_g%C3%A9nitales_f%C3%A9minines
 fijoroana vavolombelony : https://globalvoices.org/2014/04/29/gambian-activists-battle-religion-tradition-in-fight-against-female-genital-mutilation/
 Ny tatitry ny Firenena Mikambana ho an'ny taona 2016: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/GN/ReportGenitalMutilationGuinea_FR.pdf
 97 % amin'ireo ankizivavy sy vehivavy ao anelanelan'ny 15 sy 49 taona no niharan'ny fanimbinana taovam-pananahana: http://www.unmultimedia.org/radio/french/2016/05/excision-proner-leradication-plutot-que-la-medicalisation/#.WH-QTlPhCM8
 Joe Biden sy Richard Lugar nampiditra ny Hetsika iraisampirenena hanoherana ny herisetra atao amin'ny vehivavy: http://www.fgmnetwork.org/gonews.php?subaction=showfull&id=1194135756&archive=
 fihetsika io no miafara aminà fahaverezan-drà: http://www.cirp.org/pages/female/pieters1/
 tatitry ny Amnesty International: https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3hcnimczRAhUFbBoKHbioA0EQFghRMAc&url=https%3A%2F%2Fwww.amnesty.org%2Fdownload%2FDocuments%2F156000%2Fact770071997fr.pdf&usg=AFQjCNGW1uUjCFNHJbpWDpzjTFrjBNU0BA&sig2=J3vRD1wWwF30FUayqaeqLA&bvm=bv.144224172,d.d24
 fanentanana iray nanabeazana: http://www.tostan.org/country/senegal